NgoJulayi 21, unondaba weza kuShaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Materials Co.
Iimveliso zesilvery ezigqityiweyo ezinobukhazikhazi besinyithi, ezinye ziityhubhu ezingqukuva, amanye ngamaqhekeza axande. “Le yinto ekrwada esetyenziswa kwisibonisi sefowuni yeApple?”Xa ujongene nemibuzo yentatheli, Mr. Qi Ukuza, umntu ophetheyo kwishishini, kwaziswa ukuba iimveliso ezigqityiweyo abazenzileyo zenziwa zivela kwizinyithi ezingenazintsimbi kunye nesinyithi esinqabileyo kwiithagethi zokwaleka, Ezizizinto ezibonakalayo zokwenza umboniso wescreen. “Emva kokuba izinto ezingasetyenziswanga zibonelelwa kwabanye abenzi, umphunga wezinto ezisetyenzisiweyo kusetyenziswa izixhobo, ngokufanayo kutshizwe umphezulu weglasi ukwenza ukutyabeka, ngalo maleko wengubo, iglasi ingabonisa umfanekiso.”Mr. UQi Baoming uthe.
Ukwenza isambatho esifanelekileyo semveliso eluhlaza akukho lula, Okokuqala, umlinganiselo wesinyithi ukuba ulunge kanye, i-gasification yokwenza iincinci zentsimbi ezintle kunye ezifanayo. Okwesibini, ukudibanisa ngokupheleleyo isinyithi, iqondo lobushushu nalo libaluleke kakhulu, kushushu kakhulu kwaye kuyabanda kakhulu akunakuba njalo, ulawulo olubi oluncinci luya kutshintsha imeko, ichaphazela ifuthe lemveliso egqityiweyo. Ukwengeza, isicelo esikumboniso nakwiglasi yeemoto, iimveliso zangasese, isidingo seentlobo ezahlukeneyo zesinyithi, umyinge, Ubushushu kunye netekhnoloji zahlukile. Ngesi sizathu, ishishini alichazanga ixesha elininzi kuphando nakwezilingo zophuhliso, ngakumbi ukubonelela ngezinto ezingasetyenziswanga ukubonisa iselfowuni ka-Apple, iimfuno zingqongqo ngakumbi, zihlala zisebenza ngokuqhubekayo ixesha elongezelelweyo kuvavanyo, kwaneeholide aziphumli, inkunkuma nje yezinto ezixabisa ngaphezu 100,000 Yuan.
Mr. U-Qi Baoming uxelele oonondaba ukuba eli shishini litshintshile ngokuthe chu ukuba lishishini lobuchwephesha okoko lasekwayo 2017, ikakhulu ukuvelisa ekujoliswe kunye nokutshintshela ekujoliseni ekujoliswe kuyo tantalum, niobium, zirconium, hafnium, vanadium, nickel, titanium kunye neentsimbi ezininzi, kwaye iimveliso zisetyenziswa kumashishini afana nezikrini zokubonisa, iikhamera, izinto zococeko, izixhobo yodongwe, iglasi enkulu, amalungu auto kunye photoelectricity. “Ukuze someleze amandla ethu, siyaqhubeka nokuqhuba uphando kunye nophuhliso, Kwaye oko inkampani yasekwa, sinobuchwephesha bemveliso eluncedo elisixhenxe.” UQi Baoming wazisiwe, “ubunyulu obuphezulu ekujolise kuko kukujikeleza” Itekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi yenye yeetekhnoloji zabo ezibaluleke kakhulu, lonke uphando kunye nenkqubo yokulinga yovavanyo phantse iminyaka emine. Intatheli yafunda ukuba obu buchwephesha busetyenziselwa ikakhulu ukutyabeka ngeglasi enkulu, ngokobuchwephesha bangaphambili, ukutyabeka kulula kakhulu ukuvelisa amasuntswana amakhulu ezinyithi, iya kwenza iglasi, ukuze yonke imveliso ikhutshwe. Emva kokufaka le teknoloji, Ukutshiza kufana ngakumbi kunye nemveliso egqityiweyo inyuswe nge 20%.
Shaanxi Zhongbei Titanium-Tantalum-Niobium Metal Izixhobo Co., Ltd. ixhomekeke kubuchwepheshe bayo obuphambili kunye nomxholo wolawulo oluthembekileyo, Imiyalelo yemveliso rhoqo kunye nengxelo entle evela kubasebenzisi. Kuxelwe ukuba kwikota ezintathu zokuqala zalo nyaka, ishishini lifumene iiodolo ezingaphezu kwekhulu kwaye ingeniso yentengiso ifikelele ngaphezulu 18 yezigidi.